AMISOM oo Muqdisho looga Dilay 50 Askari
Midowga Yurub ayaa sheegay in 50 askarta AMISOM ah lagu dilay Muqdisho. Warar kale oo madax banaan ayaa sheegay in 130 kalena la dhaawacay.
Midowga Yurub ayaa xaqiijiyay in 50 askari oo ka tirsan ciidamada AMISOM lagu dilay dagaalladii u danbeeyay ee Muqdisho. Warar madaxbanaan oo VOA-du heshay ayaa sheegaya in 130 askari oo ka tirsan AMISOM ay dagaallada ku dhaawacmeen.
Ku-xigeenka afhayeenka madaxa arrimaha dibedda Midowga Yurub, Maja Kocijancic ayaa wareysi ay siisay Laanta Af-Somaliga ee VOA ku xaqiijisay dhimashada askarta ciidamada AMISOM.
Askarta AMISOM ee dhimatay ayaa VOA-da loo xaqiijiyay in ugu yaraan 40 ka mid ah ay yihiin ciidamada Burindi.
Wararka ayaa sheegaya in dhimashada ugu badan ee askarta AMISOM ay dhacday 23-kii February oo ahayd markii ay weerarka xoogga qaadeen ciidamada AMISOM iyo kuwa DKMG ee ay ku qaadeen fadhiisimada kooxda Al-Shabaab ee magaalada Muqdisho. Weerarkaasi ayaa ciidamadan huwanta ah waxay ku qabsadeen goobo muhiim ah oo ay ka mid tahay wasaaraddii hore ee gaashaandhiga.
Saraakiil ka tirsan ciidamada AMISOM ayaa warbaahinta horey ugu sheegay in 6 askari looga dilay dagaallada Muqdisho, sidoo kale kooxda Al-shabaab ayaa iyaguna sheegtay in tiro badan oo ka tirsan ciidamada AMISOM ay ku dileen dagaallada Muqdisho.
Ciidamada Faransiiska ee saldhiga ku leh dalka Djibouti ayaa xaqiijiyay in diyaarad ay leeyihiin ay dhawaan magaalada Muqdisho ka soo qaaday qaar ka tirsan ciidamada AMISOM oo dhaawacyo ay ka soo gaadheen dagaallada ugu danbeeyay ee magaalada Muqdisho.
Tirada dhimashada ciidamadan AMISOM ee dagaallada Muqdisho ayaa noqonaysa tiradii ugu badneyd ee ku dhimata dagaallada Muqdisho.
Midowga Yurub ayaa kaalmada ugu badan siiya ciidamada nabad-ilaalinta ee Midowga Africa ee ku sugan Somalia. 140 Malyuun oo Euro ayaa Midowga Yurub ay siiyeen AMISOM tan iyo sanadkii 2007-dii.